Juventus Oo Guul Dahabi Ku Hogaamisay Lugta Kowaad Ee Champions League Oo Ay 2:1 Kaga Adkaatay Naadiga Real Madrid
Juventus Oo Guul Dahabi Ku Hogaamisay Lugta Kowaad Ee Champions League Oo Ay 2:1 Kaga Adkaatay Naadiga Real Madrid 0 May 06, 2015 in Wararka by Staff SLL Media Visits: 624
Juventus Oo Guul Dahabi Ku Hogaamisay Lugta Kowaad Ee Champions League Oo Ay 2:1 Kaga Adkaatay Naadiga Real Madrid Juventus ayaa garoonkeeda guul dahabi ah kaga gaadhay kooxda Real Madrid oo marti ugu ahayd, waxayna kooxda Old Lady guushan ku gaadhay 2:1. Alvara Morata iyo Carlos Tevez ayaa kooxda Allegri udhaliyay labada gool ee ay guusha kaga gaadhay Real Madrid.
Juventus ayaa kor uqaaday rajadeeda ah inay u soo baxd finalka Champions Leaque, laakiin waxay labada kooxood ku kala bixi doonaan kulanka lugta danbe ee ka dhici doona Santiago Bernabue. Juventus ayay guushani tu ahay mid aad iyo aad muhiim ugu ah inay kulanka Bernabeu natiijo fiican ka rajayn karto.Kooxda horyaalka Talyaaniga ee Juventus ayaa garooneeda ku soo dhawaysay kooxda koobka kooxaha horyaalka Yurub difaacanaysa ee Real Madrid.Kulankan ayaa ka tirsanaa afar dhamaadka Champions Leaque-ga
Real Madrid iyo Juventus oo hore tartanka Yurub ugu kulmay 17 kulan ooh ore ayaa markii 18 aad isku wajahay kulanka lugta hore ee Champions Leaque-ga. Allegri iyo Ancelotti ayaa oo ah laba tababare oo si fiican isku fahmaya ayaa maanka ku hayay muhiimada uu leeyahay kulanka lugta hore.Xaalada garoonka ayaa ahayd mid khaas ah oo aad loo soo buux dhaafiyay.
Allegri iyo Ancelotti ayaa sidoo kale maanka ku hayay in kooxda kulanka lugta hore natiijo fiican heshaa inay kulanka lugta danbe ee Santiago Bernabeu faa’iido fiican haysan doonta, waana sababtaa waxa uu kulanka Juventus Stadium ka dhacay uu xiisaha gaarka ah ulahaa.
Juventus ayaa garoonkeeda cusub ee Juventus Stadium ku ciyaartay 17 kulan oo Champions Leaque-ga ah, waxayna guuldaro kula kulantay hal kulan oo kaliya. waxayna toban kulan guul ku gaadhay garoonkeeda. Sidaa daraadeed Juventus ayaa doonaysay inay sii ilaashato rekoodhkeeda fiican ee ay ku leedahay marka ay minankeeda ku ciyaarayso.
Juventus ayaa markiiba ku bilaabatay qaab ciyaareed fiican iyo waliba weerar iyo fursado halis ah, waxaana fursada ugu horaysay helay Arturo Vidal laakiin xidiga ree Chile ayaa xerada ganaaxa ku dhex dhacay isaga oo raadinayay rekoodhe laakiin garsooraha ayaan waxba tilmaamin.Waxaana sidoo kale fursad fiican helay Morata.
Laakiin shaqada fiican ee ay qabanaysay Juventus ayaa markiiba faa’iido u keentay, waxayna goolka furitaanka la timid daqiiqdii 8 aad, waxaana goolkaas udhaliyay Alvaro Morata, waxayna ciyaartu noqotay 1:0 ay Juventus hogaanka xili hore hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Marcelo ayaa si aan cudur daar lahayn booskiisa u lumiyay, wuxuuna baanaan siiyay Tevez kaas oo kubbad xoogan ku tuuray goolka Real Madrid, laakiin Casillas ayaa marka hore sameeyay badbaadin balse Morata oo wax yar u jiray ayaa kubbada ka soo booday si fiican shabaqa u soo taabsiiyay.
Kulankan ayaa ahaa kulankii ugu horeeyay ee Real Madrid xili ciyaareedkan afar bartilmaameed lagu helay toban daqiiqo gudaheed. Juventus ayaana u muuqatay koox ay kalsooni ka buuxdo.Real Madrid ayaa fursadeeda ugu horaysay daqiiqadii 13 aad markaas oo uu Toni Kroos meel xerada ganaaxa Juventus ka baxsan uu kubbad halis ahayd kaga tuuray goolka Juve laakiin Buffun ayaa kubbada dibada iskaga leexiyay.
Daqiiqadii 24 aad ayuu Ronlado helay fursad fiican kadib markii uu jabiyay offside-ka wuxuuna kubbad fiican ka helay Isco laakiin Lichtsteiner ayaa markiiba culayska saaray taas oo keentay inuu Ronaldo kubbad goolka garab mariyo.
Laakiin Real Madrid ayaa goolka barbaraha la timid daqiiqadii 27 aad, waxaaa goolka barbaraha u keenay Cristiano Ronaldo kaas oo udhaliyay gool madax ah, wuxuuna markiisa ciyaarta ka dhigay barbaro 1:1 ah. James Rodríguez ayaa kubbad soo dhex dhigay xerada ganaaxa Juventus, waxaana kubbada cidlo goolka Buffon hortiisa ah ka helay Ronlado kaas oo si sahlan madax ugu leexiyay kubbada.Muu jirin mid ka mid ah difaaca Juventus oo raacday Ronaldo.
Goolkan ayaa ahaa goolkii 9 aad ee uu Ronaldo xili ciyaareedkan ka dhaliyo Champions Leaque-ga wuxuuna sidaa ku noqday xidiga hogaanka u haya gool dhalinta Champions Leaque-ga ee xili ciyaareedka 2014/15. Goolkan ayaa sidoo kale ayaa ahaa goolkii 76 aad ee uu Ronlado ka dhaliyo Champions Leaque-ga waayihiisa ciyaareed, wuxuuna sidaa ku dhigay rekoodh cusub oo gool dhalinta Champions Leaque-ga ah. Ronaldo ayaa hal gool ka hormaray Lionel Messi oo ay markii hore wada lahaayeen min 75 gool.
Juventus ayaa bilawday inay markale raadiso gool kale waxaana iskud ay fiican sameeyay Marcisio kaas oo kuubad joog hoosa ku socota wax yar u marayay goolka Real. Laakiin Real Madrid ayaa daaqiiqadii 40 aad heshay fursada ugu halista badnayd ee ay goolka labaad kula iman gaadhay. Isco ayaa kubbad soo hormariyay goolka Juventus, waxaana iska leexiyay Buffun laakiin James Rodriguez oo duulaya ayaa kubbad si cajiib ah madaxa ugu darbeeyay balse dadaalkiisa ayaa ku dhamaaday inay kubbadu birta goolka ka soo boodo.
Inkasta oo ay labada kooxoodba dadaal badan u galeen sidii ay hogaanka ula wareegi lahaayeen ayuu 45 kii daqiiqo ee qaybtii hore ku dhamaaday barbaro 1:1 ah. Waxyaabaha yaabka ah ee ay qaybta hore labada kooxood iskaga mid ahaayeen ayaa ahad inay koox kastaaba samaysay afar bartilmaameed iyo waliba min sideed isku day, halka ay sidoo kale min hal gool ku dhaliyeen afarta bartilmaameed ee ay qaybta hore sameeyeen.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay labada kooxood ku bilawdeen qaab uu taxadar badani ku jiro, waxaana weerar gaabis ah bilawday Juventus. Daqiiqadii 56 aad ayay Morata iyo Tevez goolka Real Madrid ku soo qaadeen weerar deg deg ah oo halis ah, Marcelo ayaa qalad ku galay Morata laakiin xidiga ree Spain ayaa kubbada u sii tuuray Tevez, sidaa garsoore M. Atkinson ayaa daayay inay ciyaartu sii socoto.
Tevez ayaa kubbada la soo dhex galay xerada ganaaxa Madrid iyada oo uu Carvajal ahaa difaaca kaliya ee baacsanayay Tevez laakiin Carvajal ayaa qalad ku galay Carlos Tevez oo ku jiray xerada ganaaxa Real Madrid, garsooraha ayaana tilmaamay inay rekoodhe tahay.
Halkan ayuu buuq badani ka dhacay waxaana kaadhadhka digniinta ah la siiyay Vidal iyo Marcelo. Ciyaartoyda Juventus ayaa ka cadhooday in aanu garsooruhu kaadhka cas u tagin Carvajal oo ahaa difaaca ugu danbeeya iyo in aanu Marcelo digniinta siin, inkasta oo uu markii danbe siiyay.
Carlos Tevez ayaana kubbad qaatay isla markaana isku diyaariyay inuu Casillas kubbada ku tuurto. Xidiga ree Argenina oo ay masuuliyad wayni saarnayd ayaan wax qalad ah samayn wuxuuna goolka ka dhaliyay goobtii uu Casills taagnaa, wuxuuna Tevez goolka kooxdiisa Juventus udhaliyay daqiiqadii 57 aad.
Juventus ayaa sidoo markale mariiba fursado kale samaysay, laakiin daqiiqadii 61 aad ayuu Cristiano Ronlado helay fursad dahabi ah oo uu goolka barbaraha markale ku keeni gaadhay laakiin kubbad uu Bale goolka Juventus soo hormarayay ayaa wax yar kaga baxsatay.
Markii ay Juventus goolka labaad dhalisay ayay labada tababareba shaxdooda badaleen, waxaana badalka horsameeyay Ancelotti oo Chicharito ciyaarta soo galiyay halka uu Isco saaray, wuxuuna Ancelotti shaxdiisa ka dhigay 4-3-3, waxaana jawaab bixiyay Allegri kaas oo ciyaarta ka saaray Stefano Sturaro, wuxuuna ku soo badalay Andrea Barzagli, Allegri ayaa shaxdiisa isna u badalay 3- 5-2.Bale ayaa markale qaab ciyaareed liita soo bandhigay isaga oo aanta badan ciyaarta ka dhex muuqan.
Real Madrid ayaa baadi doon ugashay sidii ay markale iskaga soo celin lahayd goolka ay Juventus kaga hormartay laakiin difaaca Juventus ayaa fursadaha ay abuurtay Real Madrid iska ilaaliyay.Juventus ayaana inta badan markii ay goolka labaad heshay difaac ku jirtay halka ay marka kubbada ay hesho ay weerar deg deg ah qaadaysay.
Dhamaadkii ciyaarta iyada oo Real Madrid goolka barbaraha raadinaysa ayay Juventus heshay saddex fursadood oo goolal loo fishay laakiin dadaal uu sameeyay Casillas ayaa Juventus u diiday inay goolal kale sameyso.
Inkasta oo ay dadaal badan samaysay Real Madrid ayayna haddana samayn fursado halis ah oo badan waxaana fursadaha halista ah dhamaadkii ciyaarta heshay Juventus oo kuba sigatay inay goolka saddexaad la timaado.Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2:1 ay Juventus guul ku gaadhay kulanka lugta hore ee Champions Leaque-ga.Kulanka danbe ayay labada kooxood ku kala bixi doonaan Bernabeu. No Comments yet... Print
Name: Email: Website: Security Code: Comment: Social Media Related Items War weyn:Afhayeenka Madaxtooyada Somaliland Ku Guul-Daraystey Shaqadii Xafiiska Afhayeenka Iyo Warbaahinta Madaxa Banaan Oo Qaaday Talaabo Masuulkan Galaafan Karta
Cali Xoor-Xoor oo xadhig dirqi kaga bad-baaday,labadii ilaalada ahaana laga qaaday by Abdi Mustafe
25/03/2017 - 17:42:59
Daawo Gudoomiye Kuxigeenka Xisbiga Waddani ee USA Jamal Dahir Shirdoon oo Qabtay Shir Saxaafadeed oo uu kaga Hadlay Xaaladah kala Duwan ee Dalka Somaliland kajira
Halkan Ka Daawo Arrin Yaable Oo Hargeysa Ka Dhacay Iyo Laba Nin Oo Neef Sac Bakhtiyey Badhtama Hargeysa Ku Qashay Oo Gacanta Lagu Soo Dhigay Iyo Hilibkii Neefkaa Bakhtiyey Oo Ay Doonayeen In Ay Suuqa Hiliblayaasha Hargeysa Kaga Iibiyaan Shacabka.
21/03/2017 - 17:17:25
Dawlada aynu jaarka nahay ee Ethopia ayaa Gurmad xoogan kaga qayb qaadatay taakuleynta dadka ay abaaruhu saameeyeen
20/03/2017 - 19:30:45